Ose wechitatu German inokurukura cryptocurrencies ive mubhizimisi - Blockchain News
kunyange zvazvo Bitcoin, Ethereum uye Co. vakanga anosakadza nomutengo rovira ichangopfuura, mukurumbira wavo aita zvishoma kuzvikuvadza. A dzinokwana 29 muzana Vagari German vanoona digitaalinen mari sezvo inonakidza mubhizimisi. Mumiriri ongororo yakaitwa akapoteredza Postbank Digital Study 2018 akatora nzvimbo pakati kuguma February uye kuguma March, kureva pakarepo mushure dzimwe nguva unopinza zvikuru mutengo chikawira iri digitaalinen dzeEurope. Zvikuru sei, Rusununguko pamutemo zvemari gadziriro uye tarisiro yakakwirira anodzoka anewo unokwezva guru vokuGermany. The mubereko womuduku uye digitally affine eGermany ari kunyanya kutaurwa. In zera boka pakati 18 uye 34, anenge mumwe maviri (46 muzana) anofarira cryptocurrencies ive mubhizimisi – pasinei ichiwanzova mishumo.
Media Kuvapo kunowedzera kufarira Bitcoin uye Co
Gore rapera, cryptocurrency rate Akakwakuka kubva rekodhi kumusoro unotevera, asi kubva pakupera 2017, mutengo Bitcoin, yainyanya kushandiswa cryptocurrency, rawa kupfuura 65 muzana. Mapepanhau zvakawanda pamusoro mutengo nokufamba uye vamiririri zhinji indasitiri vachitaura nyevero; akadai Deutsche Bundesbank kana German Financial Supervisory Authority Bafin. Manzwi penyanzvi, akanga ataura kumukira iri mubhizimisi bhizimisi kubudikidza cryptocurrencies, vakavawo yakanyarara zvikuru.
“Zvinokosha kucherechedza kuti vokuGermany vachiri kufarira cryptocurrencies sezvo mari mubhizimisi pasinei dzakakwirira nezvinhu uye njodzi pachena,” anoti Dr. Thomas kushota, Postbank Chief Digital Officer. “Zvechokwadi pane ngozi chaiyo kuti vanhu acharasikirwa mari chete nokuti vachitevera hype.” Bitcoin aiva cryptocurrency wokutanga 2009, uye ikozvino mune zvinopfuura 1,500. Decentralized date kutarisirwa uye cryptographically yakasimbiswa protocols kusika digitaalinen mubhadharo kwema pasina nechepakati zviremera zvakadai nemabhangi.
Vakadzi anonakidzwa nokuita hurongwa rusununguko, pevanhu kudzokera nemikana
Hazvina kunyanya rusununguko akasimbisa zvemari hurongwa kuti fascinates veGermany pamusoro cryptocurrencies. Izvi zviri kukosha vakadzi (60 muzana) pane vanhu (51 muzana). Tarisiro vaifungidzirwa yakakwirira anodzoka, pane rimwe divi, kunyanya Zvinondisvota varume (56 muzana zvichienzaniswa 36 muzana zvevakadzi). Nokuti ose kukuchidzira kuti cryptocurrencies rechitatu, kusazivana kunokoshawo. Kusiyana, semuyenzaniso, yemakambani mugove, wacho investor haubvi mubereko. With wenyama nhaka cryptocurrencies hapana webhanga mushandi kana bhuroka ane nzwisiso dhepoti. Nokuti anofarira ose cheshanu munhu, panewo mupfungwa zvikonzero zvakadai vanakidzwe uye “goridhe digger kunzwa” kuti bhizimisi ari yerudzi rutsva muchimiro digitaalinen inivhesitimendi.
Unokwezva nevechiduku kunyanya guru
Danho kuti mari chinoitwa kunyanya vechidiki. At matanhatu muzana, digitaalinen zvemo vane cryptocurrencies kaviri vazhinji avhareji yevagari. Munyaya inotevera gumi mwedzi, mumwe 14 muzana 18- kuti makore 34-vane vana vane makore vachiri kuda kukura cryptocurrencies. Nechepakati vemazera ose, izvi chete masere muzana. “Pasinei ose unokwezva, vechiduku vanoita havafaniri kuona inopa kubva isingachinji rwezvemabhengi hurongwa. Uyo atova inoita mubhizimisi securities ive mubhizimisi vanofanira kwete vanopedzisira cryptocurrencies nokuda dzamatunhu ngozi dzingavapo. Nekuti ichi mhando mari iri zvikuru dzokufungidzira, “anoenderera Thomas mangel.
Ruzivo pamusoro nemikana uye njodzi iri pamwe dzakanaka
Mubhadharo nokufamba mu cryptocurrencies uyewo urongwa kuburikidza rwezvemabhengi syndicates kana kunyange nyika kumisa cryptocurrencies yavo zvakakonzera kupararira nenhepfenyuro. Zvakabuda pakudzidza anoratidza kuti iri nhau kuvapo kunotungamirira vazhinji veGermany kuti kugumisa kuti vanoziva cryptocurrencies – nekuti havana kare kuverenga kana kunzwa zvakawanda pamusoro pavo. 20 muzana vokuGermany setifaya pachavo zivo cryptocurrencies yakanaka kana zvakanaka chaizvo. The digitaalinen zvemo kunzwa kunyange njodzi pasi: 29 muzana 18- kuti makore 34-vane vana vane makore funga pachavo “crypto connoisseurs”.
“Nokuda kwemashoko hypes, vanhu vazhinji kuona ruzivo rwavo mikana uye ngozi cryptocurrencies sechinhu mubhizimisi,” anonyevera Thomas mangel. Semuyenzaniso, vazhinji havana kuziva kuti purofiti kubva cryptocurrencies vanofanira kunonyorwa zvakazara kana vasiri kuchengeta kweinenge rimwe gore. Pamusoro pazvose, mukana zvachose kurasikirwa, izvo hakuwaniki mamwe upfumi chimiro ichi, hakuna kupiwa zvakakwana hanya. Ani vangada vanopedzisira cryptocurrencies, zvisinei, achaudzwa kusarudza chete chitsama kuti vanogona kuita pasina.
Background ruzivo pamusoro Postbank Digital Study 2018 – The Digital German uye Mari
Munguva kubva February kusvikira March gore rino, 3,100 VokuGermany vakabvunzurudzwa nokuda Postbank Digital Study 2018 – The Digital German uye Mari. Nokuti nguva chechina mumutsetse, Postbank kudzidza anoongorora zviitiko zviri zvichiitika akasiyana zvoupenyu German pachinhu digitization zvavo uye zvemari misoro zvikurukuru. Kuti aratidze munhu vemo-mumiririri mamiriro, mharidzo yakanga weighted neHurumende (proportionalization), zera uye vakadzi. The bhuku faira yaidzambira Census 2011 of Federal Statistical Office. Izvi zvakatibatsira vakagumisa kuti wose nhamba. Zvarakasiya ari kwadzo zvinogona kutsanangurwa rounding misiyano.
Kylie Terrezza anoti:
Chikumi 19, 2018 pa 5:09 PM
Chikunguru 21, 2018 pa 7:31 PM